China Isolar Inverter yeMandla eSolar System MPPT 60HZ 600W Inverter mveliso kunye nabathengisi | UBUNGOZI
Isolar Inverter yeMandla eSolar System MPPT 60HZ 600W Inverter
Isolar Inverter yeSolar yeNkqubo ye-MPPT 60HZ 600W Grid Tied inverter iyasebenza kwinkqubo yophahla lwegridi yeSolar PV. Iguqula amandla weSolar PV DC kumandla e-AC, ahambelana namandla eGridi. Yondla amandla elanga PV kwigridi ngeemitha. Ukuqokelela iFit okanye ukunciphisa ityala lakho.
Igama lomzekelo: GTB-600
Ikaliwe Amandla: 600W
Izinto eziluncedo ze-600W WIFI Solar Inverter encinci:
· Ukhuseleko: Akukho xinzelelo luphezulu lukhokelela kumngcipheko wokulimala, umngcipheko womlilo obangelwa kukungqubana;
· Ithembekile / ixesha elide lewaranti: inverter yendabuko amaxesha ama-2 ngaphezulu kobomi;
· Iindleko zokufaka eziphantsi: akukho zixhobo zeDC kunye nokutshintsha kweDC kunye nezinye izixhobo;
· Ukuveliswa kwamandla kunye nokunye: kunemveliso kunenkqubo yesiqhelo ye-inverter ye-15%;
· Akukho ngxolo: Ufakelo lwangaphandle, akukho mpembelelo yengxolo kwindawo yokuhlala;
· Ukufakwa kwe-Flexible / scalable: Abasebenzisi banokufakwa njengenxalenye yabahlali, njenge-1.2KW, ngokokusetyenziswa okulandelayo nangaliphi na ixesha ngama-600W andiselwe iyunithi enye. Okanye inxenye yenkqubo iya kufakelwa kwi-260W yeyunithi eqeshiselwe abanye abantu abayisebenzisayo, kwaye la malungu, ngokweemfuno ezahlukeneyo zotshintsho olulungisiweyo.
Idatha enokubakho yeSolar Inverter encinci
Amandla amakhulu okufaka 600Watt
Ubuninzi beesekethe ezifutshane zeDC 30A
Ubuninzi begalelo elisebenzayo ngoku 27.2A
Ukuveliswa kwamandla okuphezulu 600Watt
Ikaliwe amandla emveliso 600Watt
Ukulinganiswa kwemveliso yangoku 5A 2.6A
Iyunithi enkulu kwisekethe nganye yesebe 5pcs, Isigaba esinye） 10pcs, Isigaba esinye）
Imilinganiselo (L × W × H) 280mm × 200mm × 40mm
Udibaniso lwe-600W Inverter encinci
Incwadana yomsebenzisi ye-600W Solar Micro Inverter
Egqithileyo Kwigridi eqhagamshele iMicrosoft Solar Power Inverter 400 Watt
Okulandelayo: 1200W Wifi Micro Inverter Solar Grid Tie Solar Iphaneli Smart Inverter
Inverter yegridi yelanga eyi-500W
Inverter yelanga engama-600W
I-600W inverter encinci yelanga
Inverter mini yelanga